China Pụrụ Iche Nke Fluidized-bed Jet Mill Na High ekweghị ekwe Material ụlọ ọrụ na-emepụta | Qiangdi
Jiri ihe pụrụ iche na akụkụ nke ngwaahịa ịkpọtụrụ iji mejuo isi ike dị iche iche nke ngwaahịa.
Wheel Igwe seramiiki ma ọ bụ SiO ma ọ bụ Carborundum iji kwado maka ngwaahịa dị iche iche siri ike nke ike ha dị elu karịa nchara.
Pasting seramiiki mpempe akwụkwọ na n'ime mgbidi nke Jet na nkume igwe nri.
● pasting Pu ma ọ bụ ceramik na cyclone separator na ájá mkpoko.
Ngwongwo igwe ugboelu ugbo ugbo mmiri bu ugbo mmiri, cyclone, nzacha akpa na ihe ndi ozo. A na-atụba ikuku ikuku, nke a na-eme ka ọ ghara ịmịnye ya n'ime ụlọ na-egweri site na ikuku ikuku, a na-akụghasị ibe ya na nkwonkwo nke ikuku ụgbọ elu anọ dị elu ma mesịa mechaa. Mgbe ahụ, a ga-ekewapụta ihe ahụ n'ọtụtụ dị iche iche n'okpuru ike centrifugal na ike centripetal. Ruru eru ezi ahụ na-anakọtara site na cyclone na akpa nyo, mgbe oversize ahụ ga-laghachiri na-egweri ụlọ maka regrinding.
Ihe edeturu: Mwepu ikuku ikuku sitere na 2 m3 / min ruo 40 m3 / min. Production ikike na-adabere kpọmkwem agwa nke gị ihe onwunwe, na ike ga-anwale na anyị ule ụgbọ. Data nke ikike imepụta na fineness ngwaahịa na mpempe akwụkwọ a bụ naanị maka amaokwu gị. Dị iche iche ihe nwere dị iche iche e ji mara, na mgbe ahụ, otu ihe nlereanya nke ugboelu na nkume igwe nri ga-enye dị iche iche mmepụta arụmọrụ maka dị iche iche ihe onwunwe. Biko kpọtụrụ m maka ịkọwapụta ọrụ aka ma ọ bụ ọnwụnwa maka ihe eji enyere gị aka.
1.Precision seramiiki mkpuchi, na-agbanwe mgbochi mgbochi mkpuchi site na nhazi usoro ihe iji kwado ịdị ọcha nke ngwaahịa. Karịsịa dabara maka ngwaahịa siri ike, dị ka WC, SiC, SiN, SiO2 were gabazie.
Nkwado: Efere ma ọ bụ SiO ma ọ bụ nke Carborundum na-etinye na ihe nwere Mohs Hardness Grade 5 ~ 9. na-egwe ọka na-emetụta nanị mmetụta na nkukota n'etiti grains kama nkukota na mgbidi. huu na-abụghị ịkpọtụrụ na metal nile na-egweri maka ịdị ọcha dị elu nke ikpeazụ.
4. Speed ​​nke wheel na-achịkwa Ntụgharị, urughuru size nwere ike gbanwee kpamkpam. Igwe nkedo a na - ekewaputa ihe na akpaghị aka site na ikuku iji chịkwaa ịdị mma nke ngwaahịa emechara.Ultrafine ntụ ntụ bụ ihe siri ike ma nwee ntụkwasị obi.
- Nlekọta na njikwa saịtị owuwu
- Ngwaọrụ na ịnye ahịhịa
- Nkwado na mmepụta niile
- Ndokwa na echiche echiche
- Ọnụ ego na uru bara uru
- Oge na atụmatụ akụ
- Ihe ngwọta Turnkey, nkwalite ihe ọkụkụ na mmezi ọgbara ọhụrụ
- Ndị injinia ama ama
- Na-erigbu ihe ọmụma enweta site na narị ngwa gafee ụlọ ọrụ ọ bụla
- Ọzụzụ leverage si n'aka ndị ọrụ injinia anyị na ndị mmekọ anyị
Nke gara aga: Popular ụdị Fluidized-bed Jet Mill
Osote: High ekweghị ekwe Akụrụngwa Jet Mill